မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ အကြောင်း တစေ့တစောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on May 20, 2012 in Buddhism, Science & Religion | 16 comments
လူတော်လူကောင်း သာသနာ့သူရဲကောင်း အားလုံးအတုယူဖွယ်
ဂင်းနစ်စာအုပ်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ စံချိန်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ရာမြန်မာနိုင်ငံမှ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတစ်ဦးလည်းပါ သည်။ ပိဋကတ်သုံးပုံကို အလွတ်ရွတ်ဆိုရာတွင် နံနက် ၈-နာရီမှ၁၀-နာရီအထိ တစ်ကြိမ်၊ နေ့လယ် ၁-နာရီမှ၎-နာရီအထိ တစ်ကြိမ်၊ တစ်နေ့လျှင် ၂-ကြိမ်ခွဲ၍ စာပြန်ရပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း သတ်မှတ်ထားသော စာမျက်နှာအရေအတွက် ကိုပြီးအောင်ပြန်ဆိုရပါသည်။ အချိန်ကိုက် စာမပြန်နိုင်လျှင် စာမေးပွဲကျပါသည်။ တစ်နေ့လုံး အတွက်စာ ၅-ခါ ထောက်ပေးခွင်ရှိပါသည်။ ၅-ခါထက်ပို၍ ထောက်ပေးရလျှင် စာမေးပွဲ ကျပါသည်။ စာကို အလွတ်ရွတ်ဆိုရင်း ၀ါကျတစ်ခု ကျော်သွားပါက စာမေးပွဲကျပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့အခက်ဆုံး စာမေးပွဲကြီးဟု ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် အဆိုပါ စာမေးပွဲကြီးတွင် စာမျက်နှာ၉၉၃၄-မျက်နှာလုံးကို တစ်ချက်မှထောက်မပေးရဘဲ အလွတ်ရွတ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုမျှမကသေး။ စာအုပ်မူကွဲ အမျိုးမျိုး ရှိပါက မည်သည့်စာအုပ်၊ စာမျက်နှာမည်မျှ၊ စာကြောင်းရေမည်မျှတွင် မည်သို့ဆိုသည် မည်သည့်စာအုပ်က အမှန် ဖြစ်သည်ဟူသည်အထိ ထောက်ပြနိုင်လောက်အောင် ပညာဉာဏ်ကြီးမားလွန်းလှပါသည်။ ရေးဖြေ ဖြေဆိုရာ၌လည်း
ပါဝင်ခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ထူးမှာ မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် ပိဋကတ်သုံးပုံ၊ စာမျက်နှာပေါင်း (၉၉၃၄) မျက်နှာကို တစ်ချက်မှထောက်မပေးရဘဲ အလွတ်အာဂုံဆောင်နိုင်သောကြောင့် ကမ္ဘာ့မှတ်ဉာဏ် အကောင်းဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဂင်းနစ်စာအုပ်တွင် နှစ်ကြိမ်တိုင် ဖော်ပြခံခဲ့ရပါသည်။ ဆရာတော်ကြီး၏ မှတ်ဉာဏ်ကိုချီးကျူးလိုလျှင် တိပိဋကဓရရွေးချယ်ရေး စာမေးပွဲအကြောင်း ကို သိထားသင့်ပါသည်။ ဤစာမေးပွဲသည် ပိဋကတ်သုံးပုံကို နှုတ်ဖြေ၊ ရေးဖြေဖြေဆိုရသော စာမေးပွဲဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အခက်ခဲဆုံးစာမေးပွဲကြီး ဖြစ်ပါသည်။ မည်မျှခက်ခဲပါသနည်း ဆိုလျှင် စတင်စစ်ဆေးသော မြန်မာနှစ် ၁၃၁၀-မှ ၁၃၆၂- အထိ ၅၃-နှစ်အတွင်း အောင်မြင်သူ ၉-ဦးသာရှိခဲ့ပါသည်။ စာမေးပွဲအောင်မှတ်မှာ အမှတ်၁၀၀-တွင်၇၅-မှတ်ရမှသာ အောင်မြင်
သီလက္ခန္ခ၀ဂ် – ၉၃-မှတ်
မဟာဝဂ် – ၉၇-မှတ်
ပါတိက၀ဂ် – ၉၇-မှတ်
ပါရာဇိကဏ် – ၈၉-မှတ်
ပါစိတ်ပါဠိတော် – ၉၉-မှတ်
မဟာဝဂ္ဂပါဠိတော် – ၉၂-မှတ်
စူဠ၀ဂ္ဂပါဠိတော် – ၉၈-မှတ်
ပရိဝါပါဠိတော် – ၁၀၀-မှတ်
စသည်ဖြင့် ဘာသာတိုင်းကို ဂုဏ်ထူးမှတ် ၈၅-မှတ် အထက်ဖြင့် ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးကို ၁၂၇၃၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၁-ရက်နေ့တွင် မြင်းခြံမြို့နယ်၊ကျည်ပင် ရွာသူကြီး ဦးဆုံ၊ ဒေါ်ဆင်တို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့ပါသည်။ ငယ်မည် မောင်ခင်ဖြစ်ပါသည်။ ၇-နှစ်သား အရွယ်တွင် သာမဏေ ၀တ်ခဲ့ပြီး ၁၅-နှစ်သားတွင် ပထမငယ်တန်း၊ ၁၆-နှစ်သားတွင် ပထမလတ်တန်း၊ ၂၀-နှစ်တွင် ပထမကြီးတန်းတို့ကို အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၂၉၅-တွင် အစိုးရပထမကြီးတန်းကို ပထမကျော်ဟူသော ဘွဲ့ထူးဖြင့် အမြင့်ဆုံး အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် သကျသီဟစာသင်တန်းကိုလည်းကောင်း၊ ၁၂၉၆-တွင် စာချတန်းကို လည်းကောင်း တစ်ဆက်တည်းအောင်မြင်၍ ၀ဋံသကာ(ဦးဆောက်ပန်းဘွဲ့) ဖြင့်ချီးကျူး ပူဇော်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ပိဋကတ်သုံးပုံကို အထောက်အမကင်းစွာ အာဂုံပြန်ဆို နိုင်သောကြောင့် တရားဘဏ္ဍာစိုးဟုအဓိပ္ပယ်ရသော တိပိဋကဓရဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိကဘွဲ့ကို ဆက်ကပ်ခြင်းခံခဲ့ ရပါသည်။ ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင်ပွဲကြီးတွင်လည်း မဟာစည်ဆရာတော်ကြီး မေးသမျှကို တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ ထစ်ငေါ့ခြင်းမရှိဘဲ ဖြေဆိုတော်မူ၍ ဆဋ္ဌသင်္ဂတိသဇကအဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင်စာမျက်နှာပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ရှိသော မဟာဗုဒ္ဓ၀င်ကျမ်းကြီးများကိုလည်း ပြုစုခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အစိုးရအဆက်ဆက်က ဆရာတော်ကြီးကို ဘွဲ့ထူးအမျိုးမျိုးဖြင့် ချီးကျူး ပူဇော်ခဲ့ကြပါသည်။ သာသနာ့အာဇာနည် အဂ္ဂမဟာပဏိတ၊ အဘိဓဇ မဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသဒမ္မဇောတိက၊ တိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက၊ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာ ၀ိသဇက၊ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ အကျိုးတော်ဆောင်ချုပ်ဆရာတော်ကြီး
ဦးဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ သည် ၉-၂-၁၉၉၃၊အင်္ဂါနေ့ ညနေ၊ ၄-နာရီ ၄၀-မိနစ်တွင် ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ပါသည်။
ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ထူးခြားတဲ့ မှတ်ဥဏ်ကို ကျနော်လဲ အဲဒီလို မှတ်တမ်းတင် ထားတာဖတ်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ဒီနေရာက လက်အုပ်ချီပြီး ပူဇော်လိုက်ပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီး ရဲ့ အကြောင်းကို ဖတ်သွားပါတယ်။
ဖတ်ရင်းနဲ့ ပိုပြီး ကြည်ညိုလေးစားစိတ်ဖြစ်မိပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီး၏ မှတ်ဉာဏ်ကိုချီးကျူးလိုလျှင် တိပိဋကဓရရွေးချယ်ရေး စာမေးပွဲအကြောင်း ကို သိထားသင့်ပါသည်။ ဤစာမေးပွဲသည် ပိဋကတ်သုံးပုံကို နှုတ်ဖြေ၊ ရေးဖြေဖြေဆိုရသော စာမေးပွဲဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အခက်ခဲဆုံးစာမေးပွဲကြီး ဖြစ်ပါသည်။ မည်မျှခက်ခဲပါသနည်း ဆိုလျှင် စတင်စစ်ဆေးသော မြန်မာနှစ် ၁၃၁၀-မှ ၁၃၆၂- အထိ ၅၃-နှစ်အတွင်း အောင်မြင်သူ ၉-ဦးသာရှိခဲ့ပါသည်။ စာမေးပွဲအောင်မှတ်မှာ အမှတ်၁၀၀-တွင်၇၅-မှတ်ရမှသာ အောင်မြင်
ခုလို ဆရာတော်ကြီး ရတဲ့ ရမှတ်တွေကို ကြည့်ရမြင်ရတော့ အံ့မခန်း ဥာဏ်ရည်ပိုင်ရှင်
ပုဂ္ဂိုလ်ထူးမို့စံတုစရာပါဘဲဗျာ။
မြန်မာနှစ် ၁၃၁၀-မှ ၁၃၆၂- အထိ ၅၃-နှစ်အတွင်း အောင်မြင်သူ ၉-ဦးသာရှိခဲ့ပါသည်။
ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက ဘွဲ့ရတွေကို ပြောတာလို့ထင်မိတယ်..
အမှတ်မမှားရင်.. အသက်အငယ်ဆုံး ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိကဘွဲ့ရသူ ဆရာတော်တပါးကို. စစ်အစိုးရက.. .ထောင်ချထားခဲ့တာပဲ..
ယူအက်စ်မှာပျံလွန်တော်မူခဲတဲ့.. မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီးလည်း.. ထောင်ချခံရတာပဲ..
၁။ ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝံသ
၂။ ရေစကြိုဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ၀ါယာမိန္ဒာဘိဝံသ
၃။ မော်ကျွန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသီလက္ခန္ဓာဘိဝံသ
တိပိဋကဓရ ပူဇော်ပွဲအတွက် တိ=နိ အဖွဲ့က ထုတ်ဝေတဲ့ စာမှာ တွေ့တာလေး ကူးပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ မင်းကွန်းဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ
၂။ ရေစကြိုဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ၀ါယာမိန္ဒာဘိဝံသ
၃။ မော်ကျွန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သီလက္ခန္ဓာဘိဝံသ
၄။ မြင်းမူဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ၀ံသပါလာ လင်္ကာရ
၅။ မြင်းခြံဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဂန္ဓမာလာလင်္ကာရ
၆။ ရမ္မာဝတီဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဣန္ဒပါလ
၇။ ဘုတလင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဣန္ဒာစရိယ
၈။ ကမ္ဘောဇဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ၀ီရိယာနန္ဒ
မမ ခင်များခုလို ဖြေဆိုပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးပါဗျ။
သူကြီးရေ လိုချင်တဲ့အဖြေရပီ နော်
ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင်ပွဲကြီးမှအသံဖိုင် အမေးအဖြေများကို နားထောင်ပြီးကတည်းက
ကိုကိုဇာ ရေ လေးစားကျေးဇူးတင်သဗျား ။ မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ guinness မှတ်တမ်းဝင်တယ်ဆိုတာ ကို ကြားရုံဘဲ ကြားဖူးခဲ့တာ ၊ အခု ကိုကိုဇာ တင်ပေးတာ ဖတ်ရမှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး သိသွားပါပြီဗျို့ ။
ဂင်းနစ် စံချိန် နှစ်ကြိမ် တိုင် ၀င်ခဲ့ တာ ခု ပို့ ကို ဖတ်ရ မှ သိခွင့် ရ တယ်။
ဆရာတော် ဘုရား အား အကြိမ်ကြိမ် ဦးခိုက် ရင်း ပို့ တင်သူ အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
@laypai က ခုလိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြောလို့ဝမ်းသာရပါတယ်။
@ဦးကြောင်ကြီးကတော့ဗျာ. သူကြီးကိုခိုင်ဆို နွားကင် ဘဲကင်
ကျုပ်တို့သဂျီးဂဒေါ့ ကိုဘေးနွားကင်နည်း အလွတ်အာဂုံရသဒဲ့…
သာသနာအတွက် မြန်မာပြည်မှ ဂုဏ်ယူထုိုက်သော ဂုဏ်ပြုထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ပါပေသည်။
သူကြီးကိုခိုင်မေးထာတဲ့ မေးခွန်းမှာ ဆရာတော်ကြီးစာရင်းကိုတော့
ဒါနဲ့ ရွာထဲက ဆရာသမားများကလဲ ပျောက်နေတယ်နော်။
သူတို့ ဆီလဲ မေးချင်လို့ကပါ။သိရင် ဖြေပေးကြပါနော်။
သူကြီးက ပူဆာနေလို့ ပါ။